सेयर बजारमा सबैभन्दा धेरै ट्रेडरले कमाउँछन् कि इन्भेष्टरले ? – OnlinePahar
२८ माघ २०७७, बुधबार १०:४८ Basanta Khanal	0 Comments	share market
काठमाडौं : सक्रिय रुपमा सेयर कारोबार (ट्रेडिङ) गर्नुलाई लोकप्रिय एवं रमाइलो गतिविधिका रुपमा लिन थालिएको छ । अनलाइन कारोबार प्रणाली भित्रिएपछि ट्रेडिङ गर्न झन् सजिलो भएको छ । नेपालमा पनि पछिल्लो समय सक्रिय सेयर कारोबारीको संख्या बढ्दै गएको छ । अनलाइन प्रणालीसँगै कोरोना भाइसरका कारण घरमै बस्नु परेपछि सेयर कारोबारप्रति झन आकर्षण बढेको देखिन्छ । कतिपय सेयर कारोबार गर्नेहरु त अनलाइन सेलिब्रेटीसमेत बनेका छन् । सामाजिक सञ्जालले झनै सेयरप्रति आकर्षण गराएको छ । तर यति हुँदाहुँदै पनि सक्रिय कारोबारी (ट्रेडर) र लगानीकर्ता (इन्भेष्टर) एक अर्कोसँग विरलै मात्र सम्बन्धित छन् भन्ने जान्न आवश्यक हुन्छ । ट्रेडिङ र इन्भेष्टिङ सेयर बजारमा खेल्ने २ फरकफरक तरिकाहरु हुन् । ट्रेडिङ गर्नेले बजारको उतारचढावलाई आधार बनाएर छिटो प्रतिफल लिने हिसाबले सेयर खरिदबिक्री गर्दछन् । तर दीर्घकालीन लगानीकर्ताले सम्पतिकोे विविधिकरणयुक्त पोर्टफोपलियो निर्माण गर्दछन् र बजारको उतारचढावलाई पार गर्दै दीर्घकालीन फाइदा लिन्छन् । ट्रेडिङमा अन्तर्निहित जोखिमका कारण धेरै लगानीकर्ताहरु (विशेषगरी व्यक्तिगत) यसबाट टाढै रहन खोज्दछन् । यद्दपि, अन्यले पुँजीको केही हिस्सा ट्रेडिङ गर्न र बाँकी हिस्सा दीर्घकालीन लगानीका लागि छुट्याएका पनि हुन्छन् । ट्रेडिङ र इन्भेष्टिङका यस्ता छन् आ–आफ्नै फाइदा र केही बेफाइदा पनि
लगानी : इन्भेष्टिङमा सामान्यतयः समयसँगै मूल्यमा वृद्धि हुने अनुमान गरी सेयर बोन्ड म्युचुअल फन्ड लगायत वित्तीय सम्पतिमा लगानी गर्ने काम समावेश हुन्छ । लगानीकर्ताले प्रायः जासो लामो समयसीमा निर्धारण गरेका हुन्छन् । लगानीकर्ताले अल्पकालीन लाभको सट्टा क्रमिक र चक्रवृद्धि फाइदाको माध्यमबाट सम्पति निर्माण गर्न गोज्दछन् । जति छोटो समयका लागि लगानी गरिन्छ त्यति नै अधिक पैसा गुमाउने जोखिम पनि रहने गर्दछ । त्यही भएर दीर्घकालीन लगानीमा जोड दिने गरिएको हो । अमेरिकी बजारको नियामक ‘सेक्युरिटिज एन्ड एक्सचेन्ज कमिसन ले त ३ वर्ष नपुल्दै लगानीको पैसामा पुहँच चाहनेले सेयरमा नभई बचत खातामा पैसा राख्न सल्लाह दिने गरेको छ । बजारलाई स्थिर र गतिशील बनाउने उद्देश्यले नेपालमा पनि नयाँ बजेटमार्फत अल्पकालीन कारोबारी र दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई फरक फरक पुँजीगत लाभकर लिने व्यवस्था गरिएको छ । १ वर्ष भन्दा कम समयका लागि लगानी गर्नेले धेरै पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा दीर्घकालीन लगानीलाई नै जोड दिन खाजिएको हो । दीर्घकालीन लगानीले भविष्यमा धेरै राम्रो प्रतिफल दिन सक्छ । कतिपय लगानीकर्ताहरुले दशकौंसम्म आफ्नो लगानी होल्ड गर्ने योजना बनाएका हुन्छन् । विशेषगरी दीर्घकालीन लगानीमा कम्पाउन्डिङको फाइदा मिल्छ । कम्पाउन्डिङलाई कतिपयले आठौं आश्चर्यका रुपमा समेत चित्रण गर्ने गरेका छन् । विविधिकरण गरिएको लगानी जोखिम न्यूनीकरणका लागि निकै उपयोगी मानिन्छ । बजारको दैनिक उचरचढावबाट हुने जोखिमलाई कम गर्न पनि विविधिकरणले सहयोग गर्छ । लगानीकर्ताले लगानी विविधिकरण आफैं तथा म्युचुअल फन्डमा लगानी गरेर पनि विविधिकरण गर्न सक्दछन् । तर आफ्नो पोर्टफोलियो व्यवस्थापन गर्दा जोखिम बहन गर्ने क्षमता र लगानीबाट बाहिरिने समय पनि सुरुमै तय गर्नुपर्दछ । दीर्घकालीन लगानीकर्ताले लगानी गर्नु अघि कम्पनीको आधारभूत पक्षमा विशेष ध्याने दिने गर्दछन् । कम्पनीको वास्तविक भ्याल्यू, प्रतिसेयर आम्दानी कम्पनीको इतिहास, भविष्यको सम्भावना लगायत विभिन्न पक्षमा वित्तीय अनुपातको पनि लेखाजोखा गर्दछन् । यसले अवमूल्यनमा परेका कम्पनीहरु पत्ता लगाउन सहयोग पुर्याउँछ । भ्याल्यू इन्भेष्टरका लागि आधारभूत पक्ष निकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।
कारोबार (ट्रेडिङ) : ट्रेडिङमा छिटो नाफा कमाउने लक्ष्यका साथ छोटो समयावधिमा सेयर तथा अन्य धितोपत्रहरुको खरिदबिक्री गर्ने कार्य समावेश हुन्छ । जस्तो दीर्घकालीन लगानीकर्ताले आफ्नो लगानीको समयसीमा कम्तिमा १ वर्षदेखि दशकसम्म पनि मापन गर्छन् । तर ट्रेडरहरुले भने हप्ता दिन वा मिटेटको हिसाबले सोच्ने गर्दछन् । सेयर कारोबार (ट्रेडिङ) को दुई वटा साधारण रुपहरुमा ‘डे ट्रेडिङ’ र ‘स्विङ ट्रेडिङ’ पर्दछन् । डे ट्रेडरले एक दिन पनि सेयर होल्ड गर्दैनन् । एकै कारोबार दिनमा सेयर खरिदबिक्री गर्ने गर्दछन् । यद्दपि नेपालमा भने डे ट्रेडिङ प्रचलनमा छैन । अर्कोतर्फ स्विङ ट्रेडरले भने केही दिन वा हप्तामा सेयरको भाउ बढ्ने आशाले सेयर खरिद गर्दछन् । सोही अनुसार बिक्री गर्दछन् । ट्रेडिङको दुनियाँमा कम्पनीको आधारभूत पक्ष अधिकांश समय अनावश्यक नै हुने गर्दछ । दीर्घकालमा सेयरको भाउ बढ्ने देखिए पनि केही मिनेट वा दिनका लागि भाउ बढ्छ भन्ने ग्योरेन्टी हुँदैन । तर्सथ ट्रेडरलाई कम्पनीको आधारभूत पक्षको मतलव हुँदैन । बरु उनिहरु बजारको प्राविधिक विश्लेषण र समाचार रिपोर्टहरुमा बढी ध्यान दिने गर्दछन् । कहिलेकाँही सेयर कारोबार जोखिमपूर्ण उद्यम बन्न सक्छ जस्तो कि एउटा मात्र कारोबार पनि तपाईंको विरुद्धमा गयो भने छोटो समयमै धेरै पैसा गुमाउनुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुन सक्छ । साथै ट्रेडरले लेभरेजको प्रयोग गरी जोखिम झन धेरै बढाइरहेका हुन्छन् । सापटी वा कर्जा लिएको रकमबाट कारोबार गर्नु झन् जोखिमपूर्ण हुन्छ । मार्जिन ट्रेडिङ, सर्ट सेलिङ सबै लेभरेजमा आधारित कारोबारमा पर्दछन् । सेयर ट्रेडिङको सुरुवात नै गर्ने हो भने सानो रकमबाट सुरु गर्नुपर्ने जानकारहरु बताउँछन् । ठूलो पैसा खन्याएर कारोबारमा उत्रिँदा जोखिम बढ्छ । प्रोफिट मार्जिन र स्टप लस राखेर ट्रेड गर्दा फाइदाजनक हुन सक्छ ।
त्यसो भए अब ट्रेडिङ रोज्ने कि इन्भेष्टिङ ? ट्रेडिङ र इन्भेष्टिङ दुवै वित्तीय बजार र सम्पतिसँग जोडिएको विषय भए पनि यी दुवै फरकफरक उदेश्य राखेर गरिने फरकफरक गतिविधिहरु हुन् । तसर्थ, यी दुई गतिविधिको तुलना र सामान्यीकरण गर्न मुस्किल हुन्छ ।
यद्दपि, समग्रमा हेर्ने हो भने ट्रेडिङ २ कारणले जोखिमपूर्ण देखिन्छ १. यसमा धेरै नै अड्कलबाजीहरु समावेश हुन्छन् । छिटोछिटो निर्णयहरु लिनुपर्छ, अनुमान लगाउनुपर्छ र नजान्दा कहिलेकाँही सेयर कारोबार केबल जुवाको खेलमा पनि सीमित हुन सक्छ ।
२. सेयर कारोबारमा दीर्घकालीन लगानी जस्तो विविधिकरण गर्न सम्भव हुँदैन । एक समयमा केही सीमित कारोबारलाई मात्र निगरानी गर्न सकिने भएकाले विविधिकरणमा समस्या हुन्छ । यद्दपि, कारोबारले सधैं राम्रो प्रतिफल दिँदैन भन्नु कहिलेकाँही गलत पनि हुन सक्छ । दीर्घकालीन लगानीकर्ताले आफ्नो पोर्टफोलियोमा वार्षिक ८% देखि १०% प्रतिफल पाउने अपेक्षा गर्छ भने ट्रेडरले कुनैबेला उक्त प्रतिफल एक महिनामै पाउन पनि सक्छ । तर यो कहिलेकाँही र एकदमै कमले मात्र हात पर्न सक्छन् । तर अहिलेसम्म सेयर बजारमा अधिक सफलता प्राप्त गरेको संसारका विख्यात लगानीकर्ताहरुले भने जहिले पनि दीर्घकालीन र भ्याल्यू इन्भेष्टिङमै जोड दिएका छन् । उनीहरुले आफ्नो सफलताको प्रमुख कारण पनि भ्याल्यू स्टक र दीर्घकालीन लगानी नै हो भनेका छन् । तर यहाँ हामी दुवैको आआफ्नै विशेषता हुने भएकाले ट्रेडिङ वा इन्भेष्टिङमध्ये कुनै एउटा मात्र ठीक छ भनेर भन्न सक्दैनौं । यदि, कसैमा जोखिम बहन गर्न सक्ने क्षमता कम छ र बजारको दैनिक उतारचढावबाट टाढै रहनुछ भने दीर्घकालीन लगानी नै सबैभन्दा उचित विधि हुन्छ । तर जोखिम बहन गर्नसक्ने क्षमता पनि उच्च छ र छाटो फाइदा उठाउने चाहना पनि छ भने कारोबार गर्नु पनि उचित हुन सक्छ । यसका साथै ट्रेडिङ गर्नेले दीर्घकालीन लगानी गर्नु हुँदैन र लगानी गर्नेले ट्रेडिङ गर्नु हुँदैन भन्ने कँही लेखिएको छैन । दुवैलाई साथसाथै लैजान पनि सकिन्छ । लगानी र ट्रेडिङको अनुपात कति राख्ने भन्ने चाहिँ धेरैको प्रश्न हुन सक्छ । आफ्नो पुँजीकोे ९०% हिस्सा विविधिकरणयुक्त पोर्टफोलियोमा दीर्घकालीन लगानी गर्न र १०% रकम सक्रिय रुपमा सेयर ट्रेडिङका लागि छुट्याउन सकिनेतर्फ धेरैले सुझाव दिएका छन् । Source: Nepalipaisa
← मेरो श्रीमान् त कहिल्यै पनि मेरो रहेनछन्… वर्षा सेढाईं र कमलेश जोशी
नेपाल मौसम: औसतभन्दा धेरै पानी पर्ने अनुमान; यसले ल्याउने तीन खतरा के-के हुन्? →
प्रभु इन्स्योरेन्सको लाभांश प्रस्ताव पारित, बोनस शेयर कति ?
२८ माघ २०७७, बुधबार १६:५९ Basanta Khanal	0